Ụzọ 6 gọọmenti ji chọọ igbo mkpa ndị ọchịehi - BBC News Ìgbò
Nsogbu dị n'etiti ndị ọrụugbo na ndị ọchịehi ataala isi narị puku mmadụ na steeti dị icheiche Naịjirịa.
Ọtụtụ narị mmadụ anwụọla kamgbe ọnwa Jenuwarị afọ a bụ 2018 na ya bụ ọgbaghara na-eme na steeti Benue, Platu, Kadụna na ebe ndị ọzọ dị na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa nakwa na mpaghara ọdịda anyanwụ.
Atụmatụ ọhụrụ gọọmenti etiti wepụtara bụ nke ha kpọrọ 'National Livestock Transformational Plan' na Bekee bụ onye ndụmọdụ otu na-eleba anya na akụ na ụba obodo bụ 'National Economic Council' bụ Andrew Kwasiri wepụtara ya ụnyaahụ n'Abuja.
Ndị ọchịehi awakpola Akure South
'Kwụsị ime ndị ọchịehi ka ụmụnna gị'
Ndị nọ ngosi ya bụ atụmatụ bụ mịnịsta ọrụụgbo bụ Audu Ogbeh na aka na-achị Benue steeti bụ Samuel Ortom.
Atụmatụ isii ahụ bụ;
Itinye ego irite uru: Nke a bụ nke ha kpọrọ 'Economic Investment' na Bekee. Nke a bụ itinye ego ikwalite ebe a na-azụ ehi nke ga-aga ahịa na steeti asaa na Naịjirịa a ga-eji bido ya iji hụụ na a kwalitere ịchịehi nakwa ihe ndị ehi na-emepụta. Ha etinyekwa anya na ikwalite ụdị ehi a na-achị site na itinye nke e ji sayensị hazie ma mezikwa ala dị mma nakwa mmiri ha ga-eji na-azụ ehi ha
Ikpe udo: Gọọmenti kwuru na ha ga-ewugharị ntukwasị obi dị n'eiti ndị ọrụugbo na ndị ọchịehi site n'ikwalite obodo dị icheiche ebe ndị ọchịehi ahụ nọ ka e nwekwaike nwee udo tọrọ atọ n'etiti ha
Iwu na usoro: A ga-eguzobe iwu na usoro ga na-edu ndị ọchịehi na ndị ọrụugbo nke ga-ahụ maka etu ndị ọchịehi si achị ehi ha. A na-elekwa anya na nke a ga-ewetakwa udo
Enyemaka Ikwalite obodo: Nke a bụ iji wugharịa ihe ndị ọchịehi mebisiri n'obodo ndị ahụ ha wakporo na mbụ, dịka ụlọ ndị mmadụ, ụlọụka, ụlọọgwụ, ahịa na ihe ndị ọzọ
Mgbasaozi na agụmakwụkwọ: Atụmatụ nke ise a bụ iji kwalite mgbasaozi gbasara ikwalite ịchịehi na-etu a ga-esi wulie ebe a na-achụehi na steeti ndị ahụ nakwa ịkwụsị nsogbu ndị na-apụa n'etiti ha dịka igbu mmadụ, imebi ihe gụnyere ụlọakwụkwọ
Nleta na nyocha: Nke a bụ nke a ga-eme iji hụụ na atụmatụ ndị ọzọ na-aga etu o si kwesi na ịchọpụta nsogbu ndị nwereike ime na ọ gaghị nke ọma.
Ọchịehị nabata nụ mkpapụta ala - Ugwuanyi
Ghọta nụ na m na-arụ ọrụ - Buhari
Steeti ebe atụmatụ ndị a ga-ebido
Nkenke aha onyonyo Ọtụtụ ehi na-agagharị n'ime obodo Enugu
Atụmatụ ndị a agaghị amalite na steeti niile na Naịjirịa, e nwere steeti ndị ga-amalite ya tupu ndị ọzọ esonye ha. Steeti ndị ahụ bụ;
Atụmatụ a gụnyere imebe ebe a na-azụ ehi na steeti ndị ahụ.
Ụka Metọdist: Kpọọ ndị ọchịehi 'ndị oyiegwu'
Akụkọ kachasị n'abali: Buhari akatọọla ndị ọchịehi
N'okwu ya, Kwasari bụonye gosipụtara atụmatụ a kwuru; "E sepụtala ụdị ebe a na-azụ ehi nke ayị gosiri gọọmenti nke gụnyere etu ha ga-adị na etu ha ga-aha na steeti iri ndị ahụ.''
"Gọọmenti na-ele anya ịkwụsị nchụgharị ehi ma mee ka ha nọrọ otu ebe ka a kwụsị nsogbu ndị ọchịehi na na ndị ọrụugbo na-enwe maka na ha na-azọ otu ebe.''
"Ebe a ga-arụ maka ehi nwere ndị ga-eri ehi mkpụrụ 30, 40, 150 rue 300 nke a ga-arụ na-ebe steeti ahụ nyere ala mana ọ ga-abụ o pekatampe mkpụrụ ehi 1000 ga-dị n'otu ebe n'ime steeti iri ahụ."
Amabeghi etu ihe a ga-esi rụọ ọrụ rue mgbe o bidoro.
Katsina: Ụzọ ise ị ga-esi gbalahụ oke idemmiri
Nwa m nwere ikike ime ihe masịrị ya - Charly Boy
Isi akụkọ mere taa: Mmadụ 20 ka na-efu na idemmiri Katsina steeti.